छुल्याहा गुरु - नेपाल
छुल्याहा गुरुका लेखहरु
कुखुरी काँमार्सी भात खाखै मेरो मार्सी भात ?
छुल्याहा गुरु, श्रावण ९, २०७५
ड्याम्म ! ड्याम्म !!
-गुरुजी, अलि होश गरेर है । झन्डै हान्नुभाको ।-हाहा, किन पीर गर्छस् कान्छा ? अब केको डर ?
छुल्याहा गुरु, श्रावण २, २०७५
हामी के हौँ ?
पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले रेल, पानीजहाजका ठूलाठूला कुरा गरेर मात्र हुन्न भन्ने टिप्पणी गर्दै सरकारसाग निहुा खोजेकोमा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
छुल्याहा गुरु, असार २६, २०७५
१० महिनामा २५ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेकामा काठमाडौँ महानगरपालिका (कामपा) लाई बधाई दिनैपर्छ । ७५ प्रतिशत धनराशि जो जोगाइदिएको छ ।
छुल्याहा गुरु, असार २१, २०७५
छुल्याहा गुरु, असार ८, २०७५
हाम्रा प्रधानमन्त्री आइडियाका खानी । जुनसुकै अवस्थामा जहाँ पनि उनलाई ठाउँको ठाउँ आइडिया फुरिहाल्छ । हालैको कुरा हो– वातावरण दिवसमा रुख रोप्न पुगेका प्रधानमन्त्रीले भने, “मलाई यौटा खतरा आइडिया फुर्‍या छ ।”
छुल्याहा गुरु, जेष्ठ ३०, २०७५